Iphupho laseNewlands liqhubekela uPhilander
Ophosela amaStandard Bank Proteas, uVernon Philander ugcizelele ukuthi imiphumela kuphela ebibalulekile emuva kokuthi adlale kahle ngebhola ukushiya iSri Lanka ibambelelile emuva kwezinsuku ezimbili zomdlalo weSunfoil Test ePPC Newlands eKapa ngoLwesibili.
Lomdlali oneminyaka engu-31 uthole u-4/27 ukudlula ama-wickets angu-150 kumdlalo wakhe wesi-39 kwiSouth Africa njengoba izivakashi zikhishwe ngo-110 kuma-overs angu-43, ngaphambi kokuthi iqembu lasekhaya liqhubele umphumela walo ku-317 besanawo wonke ama-wickets.
Ama-wickets kaPhilander afike kuma-wickets angu-35 kwimidlalo eyisithupha enkundleni edumile yaseKapa.
“Ukuza lapha ekhaya lekhilikithi, hlezi kuyindawo enhle ukudlala kuyona futhi ukwenza enkundleni engithandayo ukudlala kuyona,” kusho uPhilander. “Bengeke ngicele indawo engcono engingathola khona kunaseNewlands, kodwa bheka, maningi ama-wickets okusamele athathwe kumsebenzi wami uma siya phambili.”
“Ngibambelele kuwona wonke ama-wicket engiwathathela izwe lami, kuyangijabulisa ukuthatha ama-wickets futhi ngifuna ukuthatha ama-wickets amaningi kwizwe lami.”
uKagiso Rabada uyena oqale ngokukhipha iSri Lanka, eyikhiphela abeSouth Africa ngo-4/37 wakhe, okubalwa khona i-wicket yakhe yesi-50.
Lokho kulandelwe uPhilander eqedele umsila. Uphinde wakhipha abadlali beSri Lanka besibili bokugcina ngamabhola alandelanayo, okusho ukuthi uzobe ekwi-hat-trick kwi-innings yesibili.
“Angikunakile lokho, okubalulekile ukunqoba umdlalo,” uphendule kanjalo uma ekhuluma nge-hat-trick.
uKeshav Maharaj udlale indima yakhe ngo-2/32 ngosuku oluqale ngokuthi uQuinton de Kock aqede ikhulu lakhe lesithathu emuva kokwenza ama-runs angu-101 (124 balls, 11 fours).
Ukapteni wasekhaya uFaf du Plessis ebengaphoqa i-follow-on, kodwa wakhetha ukungakwenzi lokhu futhi uPhilander usivikelile isinqumo sikakapteni.
“Njengeqembu sithathe isinqumo ngokuthi iyiphi indlela enhle engasinqobela lomdlalo,” kusho uPhilander. “Sizwa sengathi ukubeka umdlalo ngokushaya kanye nokunika abaphosayo ithuba lokuphumula, njengoba imidlalo ilandelana futhi kubalwa nomthwalo wasePE, indlela enhle le yokuthi siqhubeke phambili futhi sinqobe umdlalo.”
Uma kubhekwe usuku lwesithathu, uPhilander uveze ukuthi bebengenawo umphumela ekhanda okwamanje, kodwa bazwe besendaweni eqinile yokuthatha lezo zinqumo.
“Siningi isikhathi esisele kumdlalo weTest futhi kusasekuseni ukuthi singathi imuphi umphumela omuhle,” esho enezezela. “Sizobheka ukushaya kahle kusasa ekuseni bese sibheke ukuthi sikuphi ngesidlo sasemini.”